Sawirro: Madaxweynihii xilka laga qaaday ee Galmudug oo gaaray magaalada Kismaayo
arlaadi October 8, 2017 No Comments
Madaxweynihii xilka laga qaaday ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo halkaasoo si weyn loogusoo dhoweeyay.
Madaxweyne Xaaf ayaa waxaa soo dhoweeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, masuuliyiin ka tirsal maamulka Jubbaland, senetaro ka tirsan Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo dadweyne fara badan.
Imaatinka magaalada Kismaayo ee madaxweyne Xaaf ayaa waxa ay muujinaysaa taageerada ay maamul goboleedyada u hayaan madaxweyne Xaaf oo ay dhowaan qaar ka mid xildhibaanada baarlamaanka Galmudug xilka ka qaadeen isla markaasna ay dowlada federaalka ogolaatay xil ka qaadistiisa.
Dhanka kale waxaa Kismaayo ku wajahan madaxweynayaasha maamulada Hirshabeele Maxamed Cabdi Waare iyo Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kuwaasoo kasoo kala dhoofaya magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso.
Maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu wadaa inuu shir uga furmo magaalada Kismaayo ayada oo aysan dowlada federaalka Soomaaliya ka qaybgaleynin.
Shirka Kismaayo ayaa muujinayo khilaafka dowlada federaalka Soomaaliya kala dhaxeeya maamul goboleedyada kaasoo ku aadan cida xaqa u leh siyaasada arimaha dibada.
Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa go’aan dhex dhexaadnimo ah ka qaadatay khilaafka dalalka Khaliijka balse maamul goboleedyada oo magaalada Dubai looga yeeray ayaa taageeray xulufada Sacuudiga taasoo muujinayso sida ay madaxda maamul goboleedyada ugu dhega nugulyihiin dowladaha aan rabin inay Soomaaliya cagaheeda dib ugu istaagto.
Ummada Soomaaliyeed ayaa shirka Kismaayo ka aaminsan inuu yahay shir lagu mijixaabinayo qaranimada Soomaaliya sidoo kalena loogu adeegayo danaha dalalka ka shaqeeya inay Soomaaliya kusii jirto bur burka iyo kala qo qobka.